दुष्टको कार्यालय, जासूसी कोर्मोरन स्ट्राइकको तेस्रो किस्त | वर्तमान साहित्य
एभिलको कार्यालय, डिटेक्टिभ कोर्मोरन स्ट्राइकको तेस्रो किस्त
डायना Millan | | किताबहरु, कालो उपन्यास
Cormoran Srtike गाथा को तेस्रो किस्त प्रस्तुत गर्दै, "अफिस अफभल"। रॉबर्ट गालब्रैथ छद्म नाममा हस्ताक्षर गरे, जे के रोलिंग यस उपन्यासको साथ हामीलाई आश्चर्यचकित गर्न फर्किन्छन्।
पछिल्लो सफलताहरू "एल क्यान्टो डेल कुको" र "एल गुसानो डे सेडा" पछि, गालब्राइथले पहिलो पृष्ठबाट फेरि तनाव बनाउँदछ।
«ईभिल अफिस perhaps तीन किस्ताहरूको सबैभन्दा शक्तिशाली उपन्यास हुन सक्छ। यस अवसरमा, षड्यन्त्र केवल बisted्ग्याइएको मात्र होइन तर घनिष्ट रूपमा नायकको साथ जोडिएको छ।
पहिलो उपन्यास गलब्रैथले हामीलाई धेरै अनुपम चरित्रको साथ प्रस्तुत गर्दछ। डिटेक्टिभ स्ट्राइकको ध्यान नदिई जान्छ। एक प्रसिद्ध गायक र एक को छोरा समूह गाह्रो बाल्यकाल र सैनिक क्यारियरको साथ उनलाई एक खुट्टा खर्च भयो, नाटकलाई नाटकलाई रोचक बनाउनुहोस्.
स्ट्राइक र उनको सहायक रोबिन, एक बिहान एक बिच्छेद खुट्टा संग एक प्याकेज प्राप्त। पूर्ण निश्चितताका साथ, जासूसलाई थाहा छ कि त्यो काम शुद्ध बदला हो। स्ट्राइकको क्रसहेयरमा चार संदिग्धहरू रहेका छन्। उसको पार्टनरसँगै, कोरमोरन सबै रंगहरूमा देखा पर्नेछ म्याकाब्रे हत्यारालाई अनमास्क गर्नका लागि।
हडताल, जसलाई धेरै प्रहरीले मन परेन कि उनीहरू सक्षम छैनन् भन्ने मुद्दालाई सुल्झाइएको खण्डमा अनुसन्धानबाट टाढा राख्नु पर्छ। पुलिसको चेतावनीहरूको बाबजुद पनि, कसले उसलाई रोक्न खोज्छ भनेर पत्ता लगाउन उसले सक्दो प्रयास गर्नेछ।
उपन्यासको क्रममा, ग्यालेब्रैथले हामीलाई समय समयमा भ्रमित गर्ने प्रबन्ध गर्दछ। चार संदिग्ध र अपराध बीचको सम्बन्ध राम्रोसँग प्राप्त भएको छ। मुख्य पात्रसँग बदला लिने सबै कारणहरूको अन्धा र राम्रा कारणहरू भन्दा पनि विगतको हुन्छ, जासूस र पाठक, दुबै अन्वेषणले बनाउँदछन्।
यसका लागी प्रशंसक यस सागाको अन्तमा, स्ट्राइक र रोबिन, उनीहरूले महसुस गर्न थाल्छन् कि शायद उनीहरूले एक पेशेवर सम्बन्ध भन्दा बढि केहि तिनीहरूलाई एकजुट गर्दछ। यो केसले दुबै चरित्रको सम्बन्धलाई भावनात्मक र व्यावसायिक दुवैमा सीमित गर्दछ। एक जिज्ञासाको रूपमा, अध्यायहरू जस्तै पुस्तकको शीर्षक, द्वारा गीतहरूमा आधारित छ निलो आइस्टर कल्ट, p० र's० को दशकबाट साइकेडेलिक र भारी रक समूह।
सबै पुस्तकहरू (वा सबै सबै) जस्तै यो सँग एक जोडी "बुट्स" छ। यदि हामीले उपन्यासको केही खोट निकाल्नु प we्यो भने हामी यो भन्न सक्छौं कथाको सामान्य तालको सम्बन्धमा निन्दा पनि हतार गर्दछ। अन्त्य ... राम्रो छ, तर केहि थोरैचलचित्र निर्माता"।
यी दुई साना नकारात्मक द्वारा मूर्ख नहुनुहोस्। यो पढ्न लायकको किताब हो, वास्तवमा हामी अर्को किस्त नआउन्जेल हामी महिनौं गणना गरिरहेका छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » एभिलको कार्यालय, डिटेक्टिभ कोर्मोरन स्ट्राइकको तेस्रो किस्त
र मेरो बारेमा के छ, हेरी पॉटरको सबै पढेर र मैले अहिलेसम्म यो श्रृंखलासँग हिम्मत गरिसकेका छैनौं जुन मेरा दुई प्राथमिकताहरू (लेखक र विधा) पूरा गर्न सक्दछन्?
Interrobang लाई जवाफ दिनुहोस्
डायना Millan भन्यो
म तिनीहरूलाई अत्यधिक सिफारिश गर्दछु! सत्य यो हो कि मैले पहिलोलाई पढें कि यो उपनामको आधारमा रोलि that गर्दै थियो भनेर जान्यो, र तिनीहरू वास्तवमै यसको लागि लायक छन्!
डायना मिलनलाई जवाफ दिनुहोस्
एलीटले पढ्ने किताबहरू के हुन्?